मिर्गाैला २५ लाखमा प्रत्यारोपण, वडा अध्यक्ष र चिकित्सकसहित १२ जना पक्राउ – kalikadainik.com
मिर्गाैला २५ लाखमा प्रत्यारोपण, वडा अध्यक्ष र चिकित्सकसहित १२ जना पक्राउ
सोमबार, आषाढ २९, २०७७ | ७:२८:३४ |
काठमाडौं । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा नाता नै नपर्ने व्यक्तिलाई आफन्त बनाएको आरोपमा प्रहरीले वडाध्यक्ष, चिकित्सकसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका तीन चिकित्सक तथा कानुनी सल्लाहकारलगायतलाई पक्राउ गरेको हो । ब्युरोको टोलीले चिकित्सकहरू डा. राकेशकुमार बर्मा, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र डा. बालकृष्ण कालाखेती तथा अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार रमेश काफ्लेलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष गोपाल महर्जन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनका अधिकृत रामचन्द्र ढकाल पनि पक्राउ परेका छन् । साथै मिर्गौला खरिद–बिक्रीमा संलग्न गिरोहका व्यक्तिहरूसमेत पक्राउ परेका छन् ।